विपिन अधिकारी भन्छन् : ‘वकिलले व्यवसाय गर्ने कि समाजको नेतृत्व भन्ने छुट्टिनु पर्छ’
Law Hub Nepal माघ १०, २०७६
अपराधको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा वकिलको पेसाबारे टिप्पणी हुन थालेको छ । एकातिर केही मुद्दामा बहस गर्न धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन खडा हुने तर अर्को्तिर सर्वसाधारणले न्याय माग्दै हालेका मुद्दामा वकिल राख्नै नसक्ने अवस्था छ ।
यस्तो सन्दर्भमा वकिलहरुको आलोचना हुने गरेको छ । नागरिक समाजको पनि नेतृत्व गरेको देखिने वकिलहरु अदालतमा क्रुर अपराधी भनी पेस भएका आरोपितको पक्षमा बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ । समाजमा नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले गरेको यस्ता कार्य दोहोरो चरित्र भएको भनी आलोचना भइरहँदा यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :
अहिले बजारमा कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा बहस गर्ने वा नगर्ने भनेर चर्चा भइरहेको छ । यो बहसलाई कुन रुपमा हेरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो समाजमा समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गर्छन् समाजमा हुने सबै विवाद अन्तत: अदालतमा पुग्छन् । त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना कुरा राख्न कानुन व्यवसायी राख्ने संवैधानिक अधिकार हो । आफ्ना कुरा राम्रोसँग न्यायाधीशसमक्ष राख्न सकियोस् भनेर वकिल राख्ने हो ।
वकिलको काम भनेको न्यायमूर्तिका लागि तथ्यहरुमाथिको प्रश्नमा राख्न पाउने हो । उसले आफैं न्याय दिँदैन । न्याय प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका मात्र उसले निभाउने हो । विवादका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको मानिस बजारमा धैर्यताका साथ न्याय निरुपण गर्न सहयोगीको रुपमा मात्र रहेको हुन्छ । तथ्य र कानुनको प्रश्नमा व्याख्या गर्दा विवाद देखिनु आवश्यक छैन ।
संविधानका अरु पेसालाई रोज्ने अधिकार छैन तर कानुन व्यवसायी रोज्न पाउँछन् । यसरी रोजिएका कानुन व्यवसायी नागरिक समाज र क्रुर अपराधको डिफेन्स एकै पटक कसरी गर्न सक्छ ? यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन ?
यो एउटा दृष्टिकोण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । कानुनले आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । अभियुक्त वा आरोपितले त्यहीअनुसार नै वकिल छान्ने गरेका छन् । उसले छानेको व्यक्तिले उसको पक्षका वकालत गर्ने पर्छ ।
फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गराउन पाउनु उसको अधिकार हो। समाजमा विविध प्रकारका मान्छे छन् र विवाद पनि त्यसैगरी निस्केका छन् । फौजदारी प्रकृतिमा जुनसुकै परिस्थितिमा पीडितको पक्षको सरकार उपस्थित हुन्छ, त्यसैले आरोपितले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउनुपर्छ । त्यो काम वकिलले मात्र गर्न पाउँछ । उसले पनि न्याय पाउनु पर्छ ।
अदालतले निर्णय गर्नुअघि हरेक मानिस निर्दोष हुन्छ । अदालत र न्यायाधीशले फैसला गरेर नतोकेसम्म ऊ अपराधी हुँदैन । अपराध स्वीकार गरे पनि त्यसको डिग्री के हो भन्ने बारेमा वकिलले मात्र बोल्न सक्छ । त्यसको बाटो देखाउन सकेन भने न्यायाधीशले के आधारमा निर्णय गर्ने त ? अपराध र निर्दो्षिताको निर्णय पनि हुनु पर्ला नि ?
वकिलले कानुन व्यवसाय गरेकाले आरोपित व्यक्तिको छनोटअनुसार त्यसको सेवा दिनु स्वभाविक हो। तर प्रश्न अब यो हो कि, यसरी हामी वकिलले जसले यस्ता मुद्दाहरु बहस पनि गर्ने र सार्वजनिक रुपमा समाजको नैतिकतामा आधारित भएर बोल्ने कि नबोल्ने त्यो व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो।
मलाई भन्नुहुन्छ भने म कुनै पक्षलाई न्याय दिनका लागि अदालतमा उभिन्छु भने त्यो कानुनको ज्ञाताका आधारमा बोल्छु। त्यो तथ्य र प्रतिबद्धता हो। तर यसलाई एउटा केसमा एउटा, अर्कामा अर्को र समाजमा आउँदा अर्कै गर्छ भने त्यहाँ फरक देखिन्छ। यसरी फरक हुँदा समाजले निश्चय नै प्रश्न गर्छ। अहिलेको अवस्था यही हो ।
यो सबै कानुन व्यवसायमा रहेको प्रश्न हो । मैले कुरा गर्दा मेरोमा मात्र गर्ने होला तर चिकित्सादेखि शिक्षकसम्म यी कुरा छन् । मुख्य कुरा मेरो व्यक्तित्व कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो। कानुनले दिएको आधारमा एउटा र समाजमा अर्को देखिनु आफैंमा अस्वभाविक हुनसक्छ। कानुनले दिन्छ भने समाजले यसमा प्रश्न उठाउँछ र उठाउनु पनि पर्छ होला। समाजले तपाईं दस ठाउँमा दस वटा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ।
मैले सोध्न खोजेको नागरिक समाजको नेतृत्व र अपराधीको वकिल हुन सक्छ कि सक्दैन?
तपाईंले भनेको दोहोरो चरित्रलाई फरक रुपमा बुझ्न जरुरी छ । एउटा पक्ष र वकिल बीचको सम्बन्ध फरक परिवेश हो । संविधानले पनि विशेष सुविधा दिएको छ । म र मेरो पक्षका बीचमा कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुहुँदैन। यसलाई यही स्तरमा राख्न जरुरी छ । यो व्यवस्था आउनुको पछाडि हजारौं वर्षको योगदान छ। राज्यले मन लाग्दैमा कसैलाई थुनिदिन सक्छ । वकिलको सहयोग भएन भने धेरै आरोपितले न्याय पाउँदैन ।
मैले ब्याख्या गरेको आधारमा होइन, न्यायाधीशले प्रमाण र सबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने हो । त्यसैले त न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ । चाहे त्यो बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, हत्यारा होस् वा अन्य कुनै क्रुर अपराध गरेकै व्यक्ति होस्, उसलाई कानुन व्यवसायी पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । कानुनले हेरेर अभियुक्तलाई समान रुपमा संरक्षण दिएको यही कारणले हो। नैतिक पतनदेखि अपराधमा वकिल भएर बस्न पाउँछ तर त्यसमा दोहोर चरित्र राख्न पाउँदैन । अवसरवादका लागि कानुन व्यवसायी हुन पाउँदैन । २० वर्ष पहिले भनेको र अहिले भनेको कुरा एकै हुनुपर्छ। म कुनै पनि समयमा यु टर्न हुन सक्दिनँ । त्यसैले तीनथरी अदालतको व्यवस्था गरिएको हो । जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मको तह बनाउनु भनेको न्याय दिनकै लागि हो। वकिलले यो मुद्दा लिन्न वा लिन्छु भन्न मिल्दैन ।
वकिल राख्न पाउने अधिकार त ठिकै हो तर एउटै मुद्दामा १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेर न्याय प्रभावित गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन ?
निश्चय पनि यो प्रश्न बहस गर्नैपर्ने विषय हो । वकिल राख्न पाउने अधिकार संविधानले सबै अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई दिएको छ । तर त्यसको अर्थ पैसा हुनेले वकिलहरुको लाइन लगाउने भने पक्कै होइन । नाम चलेका वकिलहरु एउटै अभियुक्तका लागि किन पछि लाग्छन् भनेर त्यसको जवाफ नपाउँदा समाजले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।
एउटा गरिब जो फौजदारी अभियोग लागेको छ, उसले कानुन व्यवसायी नपाएर अदालतले वैतनिक वकिल राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा नाम चलेकाहरु एउटै अभियुक्तको पक्षमा लाइन लाग्नुले स्वभाविक प्रश्न सिर्जना गरेको हो । के १० जनाले बहस गरेर मात्र न्याय हुने हो ? हाम्रै देशमा पनि सुरुका समयमा बहस नोट माग्ने चलन थियो । यो विस्तारै हराउँदै गएको झैं देखिएको छ । नजिरको परिपाटी यसैगरी बसेको थियो ।
अहिले देखिएको समस्या के हो भने अवसरवादको आधारमा कानुनको व्याख्या हो । आज एउटा इजलासमा एउटा ब्याख्या गर्ने र अर्को न्यायाधीशको इजलासमा अर्को गर्ने गरिएको छ । कानुनी सल्लाह दिनुहुन्छ भने मेरो पनि आचरणका नियम छन् । मेरो पनि आफ्नो दायित्व छ। म पनि असक्षमता देखिनु हुँदैन । यति यस्तो देखिएमा मैले पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। विदेशतिर यस्तो व्यवस्था हुने गर्छ । अदालतमा एउटा र पब्लिक रुपमा दुवै कुरा गर्न पाईंदैन । एउटै हुनु आवश्यक छ ।
अपराध गर्नुस् म तपाईंको पछि छु भनेर संरक्षण गर्न पाईंदैन । कुनै वकिलले मतियारको रुपमा उभिन पाउँदैन । झुटो कुरा बोल्न हुँदैन । न्यायाधीशले पनि निर्णयको आधार बनाएर त्यसलाई उल्लेख गर्छ । अनि मात्र मर्या्दित बनाउन सकिन्छ।
कानुन व्यवसायी मर्या्दित हुने र हामी कुन स्तरमा जाने भन्ने कुरा अव निश्चित गर्ने समय आएको हो ?
यस्ता कुराहरुको अनुगमन सरकारी पक्षबाट हुन सक्दैन । स्वतन्त्र रुपमा नै निकाय हुनुपर्छ । नेपालमा पनि बार काउन्सिल छ । उसले मर्या्दित बनाउनका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जसरी तपाईं राजनीति गर्ने मानिसलाई उसले गरेको प्रतिवद्धताका बारेमा प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी वकिललाई सेवाग्राहीले पाउनुपर्छ । वकिल र सेवाग्राहीको बीचमा एक प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसमा रिस गर्न मिल्दैन । यो समाप्त भएको अवस्थामा न्याय मर्छ । म नागरिकका रुपमा कुनै कुरा राख्छु भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । मैले एक ठाउँमा एउटा कुरा र समाजको अगाडि अर्को कुरा गरेमा समाजले प्रश्न गर्छ ।
स्राेत‍ : नेपाल लाइभ